Imwe tsamba kune dzeshamwari dzangu dzese-yambiro nezvenzira yekubva kure covid-19
Iye zvino kupfuura nakare kose, munguva ino yekushaiwa, kutsigirana Pamwechete isu tinofambira mberi nekutsungirira uye tarisiro pamberi pekusaziva.
Sezvo isu tichishanda nesimba kudzivirira hutano uye hutano hwedu, tinoda kugovera nzira yedu yekudzivirira iyo COVID-19. Ndinovimba iwe unogona kuwana rubatsiro kubva pazviri.
1st, ndapota kupfeka kumeso mask kana iwe uchibuda mumba mako, ichi chinhu chakakosha sechaonero yangu
2nd, ndapota edza kudzivirira kubata nemaoko nevamwe
3, paunodzokera kumba, ndokumbirawo utouraya mabhakitiriya nekusapfuura 75% doro
4th, edza kuwedzera kurovedza muviri ita kuti muviri wako uve wakasimba zvakakwana
5th, inwa yakawanda mvura mazuva ese.
Kana iwe ukawana iyo package,
1st, uraya hutachiona kutanga,
2, ndokumbirawo uichengete kwemaawa anopfuura matatu munzvimbo yakaoma uye ine mhepo, senhau kubva kumhedzisiro, hutachiona hahuzogara kupfuura maawa matatu kazhinji mumhepo.
Mwoyo yedu nemifungo yedu zviri pamwe neruzhinji rwenyika. Tariro yedu ndeyekuve netariro yekubatana uye nekubatana sezvatinofamba ichi chisina kumboitika nguva. Pamwe chete isu tinomira newe nevadiwa vako.
Nguva yekutumira: Feb-14-2020